Gresy: Latsabatom-pitokisana sy Referandaoma ho avy · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Asteris Masouras
Voadika ny 17 Avrily 2019 4:18 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Español, Ελληνικά
Ity lahatsoratra ity dia fitantarana manokana ataonay momba ny Eoropa anaty krizy
Avy ao amin'ny pejin'ny gazety Guardian manasongadina ny krizy Grika, avy amin'ny @guardiannews
Ny takarivan'ny 31 Ôktôbra 2011, tamin'ny fanapahan-kevitra goavana ara-politika [el], nitaky latsa-bato-pitokisana avy hatrany tao amin'ny parlemanta ny Praiminisitra Grika George Papandreou ary koa fitsapankevi-bahoaka ho an'ny eny sa tsia amin'ny fampindramam-bola fara-fanavotana avy amin'ny Vondrona Eoropeana, no sady nitodika tamin'ny vondrona parlemantera avy amin'ny antokon'ny fitondrana PASOK. Na dia nanapaka fifidianana aza i Papandreou, dia mety hisy ny fifidianana mialoha, raha misy valiny ratsy amin'ny safidy sarotra amin'ny referandaoma.
Nahagaga ireo fahefana Eoropeana sy iraisam-pirenena ny vaovao, araka ny hita tamin'ny lahatsoratra avy amin'ny Guardian, Reuters, CNN, ny New York Times sy ny fampitam-baovao hafa.
Niresaka[el] tamin'ny vondrona parlemantera PASOK, nanambara ny Minisitry ny tetibola Evangelos Venizelos fa tokony ho raisina ho toy ny fidanadanana mankany amin'ny fisantarana andraikitra tsy mahazatra raisin'ny fanjakana ny fitsapa-kevi-bahoaka:
Ary mazava ho azy, tokony ho fotoana isantarana asa ho an'ny rafitra ara-panjakana sy ara-politika lehibe ny vanim-potoana hirotsahana an-tsehatra mandra-pahatongan'ny fitsapa-kevi-bahoaka. Fidanadanana hanaovana fisantarana andraikitra tsy mahazatra, mifanohitra amin'ny fananganana fanjakana vaovao, lalampanorenana maoderina mahasolotena.
Noho izany, nanome fanamby ho an'ny olom-pirenena izy, tamin'ny fametrahana ny safidy sarotra “mijanona ao amin'ny Eurozone sy miaraka amin'ny PASOK, na miverina amin'ny drachma (ventim-bola grika) sy ny fepetra ara-bola sarotra amin'ny fotoana aorian'ny ady”
Ankehitriny, ireo olom-pirenena mihitsy no hantsoina hamaly, ao anaty firindrana lojika sy misy ventiny, ahitana fiandohana, antenantenany ary ny farany, amin'ny fanohanana ny maro an'isa parlemantera: Manohana an'i Eoropa ve isika? Manohana ny Eurozone ve isika? Manohana ny Euro ve isika? Heverintsika ho toy ny zavatra tsara ve ny fandanjana? Mino ve isika fa tokony hijanona ao amin'ity vondron'ny firenena mandroso ity ary tsy hiverina any Gresy tamin'ny andron'ny drakma, na ho any Gresy taona '60 sy’ 50?
Nahazo fanehoan-kevitra miiba amin'ny ankapobeny ny fanambarana, amin'ny fanehoan-kevitra mitsikera ny fotoana nanambaràna ny referandaoma ho avy, ary koa ny mety hisian'ny fifidianana tampoka. Maro ireo fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter navoaka tamin'ny alalan'ny tenirohy #dimopsifisma sy #referendum..
Antoko lehiben'ny mpanohitra, Demokrasia Vaovao nisioka hoe:
@neademokratia: Ny fifidianana ihany no vahaolana!
Mpanao gazety Diane Shugart naneho hevitra momba ny fanambarana tamin'ny fahitalavitra nataon'ilay tompon'andraikitry ny gazety ao amin'ny Antoko Komonista Grika (KKE):
@dianalizia: ary manomboka ao Gresy ny mahafinaritra ankehitriny. mitsipaka ny referandaoma ny antoko komonista, fa mitaky fifidianana izy ireo.
Foivos Panagopoulos ao Holandy naneho hevitra momba ny fiantraikan'ny referandaoma eo amin'ny toekarena manerantany.
@suorm: Ho vongan-dranomandry madinika hiteraka vongan-dranomandry goavana mety hianjera manerana ny tsenan'ny Vondrona Eoropeana/Aziatika/Amerikana Avaratra i Gresy. Veloma ry zon'ny Vondrona Eoropeana!
Ao Athene kosa, Εliana sy Cyberela maneho hevitra momba ny fanambarana tao amin'ny sioka anankiroa:
Demokrasia be loatra androany ao #Greece. #Referendum
@ElianaVou: Mihoatra ny zava-misy (surréel) no azo ilazana ny zava-nitranga androany. Na PASOK very paikady tanteraka na PASOK very paikady tanteraka #dimopsifisma
Kyriakos Pierrakakis sy Maria Katsikovordou manontany tena amin'ny habetsaky ny fandaniana amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka ao anatin'izao fotoan-tsarotra ara-bola izao:
@Pierrakakis: Iza no hanome ny tetibidin'ny fitsapan-kevi-bahoaka?
@mariakatsme: Miarahaba, avelao aho mba ho “halam-bahoaka” kely: 110 tapitrisa Euros no tetibidin'ny fitsapa-kevi-bahoaka #dimopsifisma. Angamba tokony hiala amin'izany isika ary hisoroka ireo fianakaviana mba tsy ho tapaka herinaratra? #christmasu
Sofia Mandilara kosa tsy nanan-kolazaina tamin'ny fanehoan-kevitra avy hatrany avy amin'ny tsena iraisam-pirenena.
@thesspirit: Very isa 275 tao anatin'ny minitra vitsy i Dow Jones. Tsy misy fanehoan-kevitra fanampiny.
Maro ireo fanehoan-kevitra esoeso sy mampihomehy mitovitovy, mamelona ny sary-sy-soratra Twitter taloha iray ahitana ny mety ho fanontanian-tsafidy amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka:
@YBoyio: #42 no valinteny ho an'ny Safidy sarotra farany ao Gresy. Mbola tsy fantatra ny fanontaniana amin'ny referandaoma! [“42″ no valinteny ho an'ny fanontaniana tsy fantatra momba ny fiainana, ny tontolo sy ny zava-drehetra, ao amin'ny Hitchhikers’ Guide to the Galaxy] an'i Douglas Adams
@arkoudos: Manolo-kevitra aho mba hanao referandaoma hanapahana ny fanontaniana atao amin'ny referandaoma #dimopsifisma
@jasongrig: Fandeferana na meloka? #dimopsifisma
@IrateGreek: Fahadisoana sa bankirompitra? #dimopsifisma
Telo andro mialoha, tamin'ny 28 Oktobra, nomarihana tamin'ny fihetsiketsehana ny fankalazana ny tsingerintaonan'ny “Andron'ny Ochi” mba hahatsiarovana ny fampidirana an'i Gresy tao amin'ny Ady Lehibe Faharoa tamin'ny taona 1940.
Natao tamin'ny taona 1974 ny referandaoma Grika farany [el], mba hanapahana raha atao fanjakana ara-dalàmpanorenana na demokrasia parlemantera ny rafi-panjakana.
Ny hajian-tsary dia mampiseho ny Praiminisitra Grika George Papandreou. Sary avy amin'i Xristina, copyright Demotix (01/11/2011).